I-backwashing automatic system yokuhlunga yezindlu i-BCMseries - i-China Backwashing i-automatic filter system yezindlu ze-BCMseries Supporter, Factory -Sffiltech
Ikhaya » Imikhiqizo » Ukuhlunga kotshwala » Izindlu Zokuhlunga Ezizenzakalelayo Zokuzenzela
Ukwenza i-backwashing automatic system yokuhlunga yezindlu i-BCMseries
Uhlelo lokuzihlanza lwe-automatic olokuzenzakalelayo oluzenzakalelayo
Uchungechunge lwezindlu zokuhlunga lwe-automatic back wash
Izindlu ezigcwele zokuhlunga emuva ze-BCM zilungele ukuhlunga ukugeleza okuphezulu, isivinini esikhulu, ukungcola kwe-fluid kuyizinhlayiyana.
I-BCM egcwele i-automation ye-back wash yokuhlanza izindlu iyimikhiqizo eyenziwe ngomshini nekagesi, enezinzuzo zokuklama kahle, ukusebenza kahle kokufayeka okuphezulu, izindleko eziphansi zokusebenza, ukuhlunga okuqhubekayo kwinqubo yokugeza emuva, njll., Esetshenziswa kabanzi kwezinsimbi zamakhemikhali, amakhemikhali, amandla kagesi, amanzi e-sindano ye-oilfield, amanzi we-ballast, ukwelashwa kwamanzi-okujabulisa imvelo, njll.
Isimo esisebenzayo se-BCM se-automatic back wash yokuhlanza izindlu:
Uketshezi oluhlanjulwayo ugeleza usuka kokungenayo ungene ezindlini zokuhlunga, bese udlulela epulethini elilungisayo ungene ezindlini zokuhlunga, uketshezi lugeleza lusuka entweni yokuhlunga ngaphakathi luye ngaphandle, bese luphuma luphuma endaweni yokuhlunga yomkhumbi; Ukungcola okhiqizwe kusuka kusihlungi sokugeza emuva kuphuma ukuphuma kokuphuma kwendle.
Lapho uketshezi lugeleza ngaphakathi kwento yokuhlunga, izinhlayiya eziqinile zizobanjiswa ohlangothini lwangaphakathi lwesihlungi. Ngokwanda kokungcola, ingcindezi yokuhlukanisa phakathi kohlangothi olungcolisiwe kanye nohlangothi oluhlanzekile lokuhlunga luyanda kancane kancane. Lapho ingcindezi yokuhlukanisa ifinyelela inani elisethiwe, imitha yokucindezela ehlukile ithumela umlayezo futhi indlu yokuhlunga iqala inqubo yokugeza i-othomathikhi.
inqubo yokugeza emuva:
I-1.Gear motor ushayela ingalo yokugeza ukuze ijikeleze yi-jackshaft, i-angle yokujikeleza yengalo yokuwasha ilawulwa yi-switchelestric positioning switch, ezokwenza ihambelane nesihlungi esingahlanzwa.
I-valve yokuhambisa ivuliwe, ukuze ingcindezi engafaniyo izokwakheka phakathi kwento yokuhlunga yangaphandle (ohlangothini oluhlanzekile) nemisele engcolisayo.
3.Ngaphezu kwesinyathelo sokuhluka kwengcindezi, ukugeleza okungamanzi kohlangothi oluhlanzekile kuzogeleza kusuka kusihlungi esihlanziwe ngaphandle kuya ngaphakathi ukufeza inqubo yokugeza emuva, ukungcola okuqoqwe ohlangothini lwangaphakathi kwesikrini sokuhlunga kuzosulwa kuphume kuphume ukuhlunga ukuphuma kwendle.
I-4. Isikhathi sokugeza emuva se-elment ehlunga ngayinye isethelwe, ngakho-ke lapho isikhathi sokugeza sangemuva sesifikile, i-valve yokulahla ukungcoliswa izosondela, futhi le ndlela yokugeza emuva yento yokuhlunga isidlulile, khona-ke i-gear motor izoshayela ingalo yokuhlanza iye vula futhi, ugeze ukubuyela emuva kusethi elandelayo yokuhlunga, i-valve yokukhuculula indle izovulwa futhi., nokunye ukwenza inqubo yokugeza emuva kufya ngalinye.
5. Ngemuva kokuba konke ukuhlanza kuqedwe kuqediwe, ingalo yokuwasha ibuyela esimweni sokuqala ngaphansi kokulawulwa kwesithombe sokushintsha isithombe, okusho ukuthi umjikelezo wokugeza emuva uphelile.
6.Ngokuba ukugeza kwangemuva kugeza isethi yokuhlunga, ngakho-ke phakathi nenqubo ukuhlunga kungalondolozela isimo sokokuhlanzeka okuqhubekayo.
Setha inqubo yokugeza emuva:
Isilungiselelo sokucindezela okuhlukile: isihlungi sinengcindezi engafani, esetshenziselwa ukusetha ingcindezi yokuhlukanisa isihlungi.
Ukulungiswa kwesikhathi sesibili: ibhokisi lokulawula linedivaysi yokubeka isikhathi, engasetshenziswa ukusetha umjikelezo wenqubo yokuwasha ngokuya ngezidingo zomsebenzisi. Ukulungiselelwa kokucindezela okuhlukile kanye nokuhlelwa kwesikhathi kuyinqubo yokuzenzakalelayo yokugeza emuva, amasethingi amabili akhona ngasikhathi sinye, ngenkathi ukubeka ukucindezela kungaphambi.
Isiqalo se-3.Manual: Ngaphezu kokusetwa kokucindezela okuhlukile nesikhathi sokusetha inqubo yokugeza emuva yangasese, kukhona futhi ukhiye we-TEST wokuqalisa ngesandla inqubo, osetshenziselwa ukulungisa inkinga nokulungisa.
Izici zomklamo we-BCM egcwele okuzenzakalelayo yokuhlanza izindlu zokuhlunga emuva:
1.Isakhiwo sangaphakathi sokwenza imishini yokuhlunga sisebenzisa ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi, siyawubona umsebenzi wokugeza emuva ngomqondo weqiniso, ongasusa ngokuphelele ukungcola kokuhlunga, uhlanze wonke amakhona ngaphandle kwe-engele efile, umkhuhlane ngaphandle kokuhanjiswa, futhi uqinisekise ukusebenza kahle kokufakelwa kanye nempilo ende yenkonzo .
Okokusebenza kwe-2.Filter kukhetha izinto ezingama-304, 316L, 2205, ze-MONEL wedge lemifanekiso, ngezinzuzo zokuqina okukhulu, ukunemba okukhulu, ukumelana nokugqwala, kanye nokunemba okuphelele kokuhlunga kufinyelela kuma-microns angama-25.
I-3.Thola ukusebenza kwayo kokubuyisa kanye nomsebenzi we-strain, imishini yokuhlunga ikwazi ukubona ukugeza kwe-othomathikhi, futhi ingabhekana nokuguquguquka kwekhwalithi yamanzi okungazinzi ngaphandle kokungenelela kwencwadi.
Isistimu yokulawula imishini ye-4.Filter iyazwela, isebenza ngokunembile, futhi ingashintshashintsha kalula ingcindezi yokuhlukanisa kanye nesikhathi sokusetha inani lokugeza emuva ngokusekelwe kumanzi ahlukile nokuhlunga kokuhlunga.
5.Ngenqubo yokugeza emuva, isitsha ngasinye sokuhlunga senziwa ukugeza emuva; eqinisekisa ukuphepha kwesikrini sokuhlunga, ukuhlanza okusebenzayo, kuyilapho ezinye izihlungi zingathinteki futhi ziyaqhubeka nokuhlungwa.
Imishini ye-6.Filging inezingxenye ezingavikeleki kakhulu, akukho okungasebenziseka, enezindleko zokusebenza eziphansi nezesondlo kanye nokusebenza okulula nokuphathwa.
7.Imishini yokuhlunga yakhelwe kahle futhi inengqondo, ngosayizi omncane, oguquguqukayo futhi olungele ukufakwa nokuhamba.
Imishini ye-8.Filtration isebenzisa i-pneumatic drain valve, enesikhathi esifushane senqubo yokugeza emuva, ukusetshenziswa kwamanzi okuncane, ukuvikelwa kwemvelo nezomnotho.
Isikhungo esisebenza ngamathuluzi wokwenza amandla sikhonjiswa isikrini sokuthinta, futhi ingcindezi engafani nesethingi yesikhathi ilungele ukubukwa.
Desalination Amanzi olwandle, ejikeleza amanzi apholile nokuthamba kwe-oyela ye-oilfield, amanzi e-ballast ngomkhumbi, amanzi abilayo abesebenzisa ukugcwaliswa kwe-osterosis, ukuguqulwa kokushintshana nge-ion, i-Paper nozzle.